Free Thinker: CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (4)
CPF နှင့် ပညာရေး
ပညာရေးဟူသည် အလွန်ဈေးကြီးလှသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း ပညာရေးမှာ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး အတွက် အရေးကြီးသော လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လေရာ တိုင်းသူပြည်သား လူအများတို့ အထက်တန်းပညာရပ်များကို ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်လို့ မတက်ရဆိုတာ မရှိရလေအောင် စင်ကာပူအစိုးရမှ အစီအမံများပြုလုပ်ထား၏။ ထိုအစီအမံများမှာ အလွန် များပြားလှလေရာ ဤ CPF ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ထည့်သွင်းရေးခြင်းငှာ မလျော်ကန်။ သီးသန့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးမှ သင့်ပေမည်။
CPF Education Scheme မှာလည်း အခြား CPF အစီအမံများကဲ့သို့ပင် အလွန်များပြား ရှုပ်ထွေးလှပေရာ အကုန် လျှောက် မရေးမူ၍ သိသင့်သလောက်သာ ထုတ်နှုတ်ရေးပါအံ့။
CPF ပေးသွင်းနေရသူများအနေနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့သားသမီးများအတွက်သော် လည်းကောင်း ပညာရေးအသုံးစရိတ်များကို CPF ထဲမှ ပေးနိုင်ရန် Education Scheme ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများမှာမူ သူတို့ထုတ်ယူလိုက်သော ငွေပမာဏကို အတိုးနှင့်တကွ ပြန်ဆပ်ရန်လိုပါသည်။ သုံးလို့ရသည်ဆိုတာတောင် ကျောင်းအားလုံး အတွက် ပေးနိုင်တာမဟုတ်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားသော ကျောင်းတွင် အချိန်ပြည့်တက်ပါမှ ထုတ်သုံးနိုင်တာ ဖြစ်ပါ၏။
ဒါဆို Education Scheme အရထုတ်သုံးလိုက်တဲ့အတွက် အတိုးဘယ်လောက်ပေးရမတုံး တဲ့?
ပညာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်ကို CPF Ordinary Account မှ ထုတ်သုံးသည်ဖြစ်ရကား ပြန်ဆပ်ရမည့်အတိုးနှုံးမှာ OA ၏ အတိုးနှုံး (လက်ရှိ 2.5%) အတိုင်းပင်ဖြစ်၏။ အတိုးကို ငွေစထုတ်သည့်ရက်မှ စကာ နောက်ဆုံး အကြေပြန်လည် ဆပ်သည့် ရက်အထိ တွက်ပါမည်။ အတိုးကို လတိုးပေါ်အခြေခံကာတွက်မည်ဖြစ်သော်လည်း နှစ်ထပ်တိုးကိုပါ ပေါင်းတွက်မည်ဖြစ်၏။
ဘယ်သူ့ account ထဲကနေ ထုတ်သုံးလို့ရသလဲ?
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မိဘရဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ account ထဲကနေထုတ်သုံးနိုင်ပါ၏။ မွေးစား မိဘတွေရဲ့ account တွေထဲကလည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးများ၏ account ထဲမှသုံးလိုလျှင် မိမိနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်ပုံ အထောက်အထားများ ပူးတွဲကာ သီးသန့် လျှောက်ထားရပါသည်။
မောင်နှမသားချင်းများ၏ account ထဲမှ သုံးခွင့်ရလျှင် ပညာသင်စရိတ်အားလုံးအတွက် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆွေမျိုးသားချင်းများထံမှ ယူသုံးရမည်ဆိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်း အကန့်အသတ်ရှိ၏။
တက္ကသိုလ်တက်နေသူများအတွက် ပညာသင်စရိတ်အားလုံး၏ ၁၀%
Polytechnic, ITE တက်နေသူများအတွက် ပညာသင်စရိတ်အားလုံး၏ ၂၅%
Art College တက်နေသူများအတွက် ပညာသင်စရိတ်အားလုံး၏ ၅၀%
ပညာရေးစရိတ်ကို တစ်ယောက်ထက်ပိုသော account များမှထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားသည် ဆိုပါစို့။ ဥပမာ - သားသမီး၏ ကျောင်းစရိတ်အတွက် အဖေရော၊ အမေ့ account မှပါသုံးလိုလျှင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်ယူခွင့်မပြုပါ။ ပထမ အဖေ့ account ထဲမှ ထုတ်ခွင့်ပြုမည်။ အဖေ့ account ထဲမှာ ပိုက်ဆံကုန်သွားမှ အမေ့ account ထဲမှ ထုတ်ခွင့်ပြုပါမည်။
မိဘများအနေနှင့် တစ်ယောက်ထက်ပိုသော သားသမီးကို ကျောင်းစရိတ်ထောက်လိုသည် ဆိုပါစို့။ ပထမဆုံးလျှောက်သော ကလေးကို ဦးစားပေးပါမည်။ account ထဲတွင် ပိုက်ဆံကျန်သေးသည်ဆိုပါမှ နောက်ကလေးအား ထောက်ပံ့ခွင့်ပြုပါမည်။ အကယ်၍ နောက်ကလေးအတွက် CPF ပိုက်ဆံနှင့် မလောက်တော့လျှင် သူ့ကျောင်းစရိတ်လိုငွေကို ငွေသားဖြင့် ထပ်ဖြည့် ပေးရပါမည်။ သင့် account ထဲမှ Available Withdrawal Limit (AWL) ရှိသလောက်ထိ ကလေးများ၏ ကျောင်းစရိတ်ကို ထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်။ AWL ကို သင့် My CPF online service မှ My Statement တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
CPF ပိုက်ဆံနှင့်လည်း မလောက်၊ ငွေသားဖြင့်ပေးဘို့လည်း မတတ်နိုင်ဆိုလျှင် အခြား Study loan, financial assistance scheme စသည်တို့ ရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် ချန်ခဲ့ပြီး နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် သီးသန့်ရေးပါမည်။
ကျွန်ုပ် CPF ထဲကနေ ဘယ်လောက်သုံးလို့ရမလဲ?
သင့် CPF OA ထဲမှ ၄၀% ထိ သုံးလို့ရသည်။ ထို့ပြင် ဘယ်လောက် ကျောင်းစရိတ်ပေးရမလဲ ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်ကာ အခြား ပေးစရာရှိသည့် ဥပမာ - အိမ်ဘိုးကြွေးဆပ်ခြင်း စသည်တို့မှ နှုတ်ပြီး ကျန်တာပေးနိုင်ပါသည်။
ပိုပြီးမြင်သာထင်သာရှိရန် ဥပမာ ဇယားကလေးကိုကြည့်ပါ။
EXAMPLE 1: (For members below 55 years old)
Balance in Ordinary Account
Net Amount used for CPF Investment Scheme- Ordinary Account (CPFIS-OA)
Net amount used for education
Accumulated Ordinary Account Savings for education
40% of Accumulated Ordinary Account Savings for education
Less: Net amount used for education
Withdrawal limit for education
Cash balance in Ordinary Account
Less: Amounts reserved (if any)*
Net balance in Ordinary Account
Amount available for education (Lower of ‘A’ or ‘B’ figure)
* These generally refer to amounts which have been reserved for housing and other schemes because of earlier commitments. In addition, CPF members should also take into account their monthly housing instalments, where applicable.
အကယ်၍ သင့်ကလေး ကျောင်းစရိတ်အတွက် သင့် account ထဲမှ ပေးရန် မလောက်ဆိုပါစို့။ သင့်ဇနီး account ထဲမှလည်း ခွဲပေးလို့ ရပါသည်။ မည်သို့ခွဲသနည်း။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။
ပညာရေးအသုံးစရိတ်အတွက် Ordinary Account အပြင် အခြား account များမှ ပေးလို့ရပါသေးသလား?
အောက်ပါ ကျောင်းများတွင် အချိန်ပြည့်တက်နေသူများအတွက်သာ CPF Education Scheme ဖြင့်သုံး၍ရပါသည်။
The scheme covers all approved full-time subsidised undergraduate courses leading toadegree at the following institutions:
Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)*,
It also covers full-time subsidised diploma courses at:
LASALLE College of the Arts (LAS),
Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA),
Nanyang Polytechnic (NYP),
Republic Polytechnic (RP),
Temasek Polytechnic (TP),
Institute of Technical Education (for students pursuingaTechnical Engineer Diploma (TED) oraTechnical Diploma in Culinary Arts).
*The Bachelor of Music (Honours) programme offered by NAFA, in partnership with the Royal College of Music (London) is included under the CPF Education Scheme with effect from July 2011.
၀မ်းနည်းပါသည်။ ဘွဲ့လွန် (မဟာ၊ ပါရဂူစသည်) သင်တန်းများသည် CPF Education Scheme နှင့် အကြုံးမ၀င်ပါခင်ဗျား။
ကျွန်တော့်အဖေ/အမေ၏ CPF OA ထဲမှ ထုတ်သုံးထားသော ပညာရေးအသုံးစရိတ်များအား ကျွန်တော့် CPF ထဲမှ ပြန်ဆပ်လို့ ရပါသလား ?
မရပါ။ ပြန်ဆပ်ငွေအားလုံးကို ငွေသားဖြင့်သာ ဆပ်ရပါမည်။
ကျွန်တော့် ကျောင်းစရိတ်တွေ အကုန်သွင်းပြီးသွားပြီဗျ။ အဲဒါတွေအတွက် အဖေ့ CPF OA ထဲကနေ ပြန်ထုတ်လို့ ရဦးမလား?
မရပါ။ ကျောင်းစရိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာကျောင်းသို့ CPF OA ထဲမှ တိုက်ရိုက်ပေးခြင်းဖြစ်၏။ သွင်းပြီးသားပိုက်ဆံ အတွက် ပြန်ထုတ်ပေးရိုး ထုံးစံမရှိပါ။
ကျောင်းအပ်ရက် ကျော်သွားပြီဗျ။ ကျွန်တော် CPF Education Scheme လျှောက်လို့ ရဦးမလား?
မရပါ။ ကျောင်းအပ်နေစဉ်အတွင်းသာ လုပ်ပေးပါသည်။
ဒါဆို ကျောင်းကို ဘယ်အချိန်ငွေသွင်းပေးတာလဲ?
ကျောင်းအပ်ရက်ပိတ်ပြီး တစ်လအကြာမှာ CPF OA ထဲမှ တိုက်ရိုက်ပေးပါ၏။
ကျွန်တော့် CPF Education Scheme လျှောက်ထားတာ ရ၊ မရဆိုတာ ဘယ်မှာကြည့်ရင် ရမတုံး?
www.cpf.gov.sg ကို ခင်ဗျား SingPass နဲ့ ၀င်ပါ။ နောက်ပြီး 'My Activities' မှာ ကြည့်ပါဗျား။
CPF Education Scheme အောက်ကနေ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုကြွေးပြန်ဆပ်မလဲ တဲ့?
CPF Education Scheme အောက်မှ ငွေချေးထားသူကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ချေးငွေကို အတိုးနှင့်တကွ အားလုံး အကြေ ပြန်ဆပ်ရန် လိုပါသည်။ ပြန်ဆပ်ငွေကို မူရင်းချေးငွေကို ထုတ်ခဲ့သူ၏ CPF Ordinary Account အတွင်းသို့ ပြန်လည် ထည့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပြန်ဆပ်နိုင်သလို လစဉ်အရစ်ကျလည်း ပြန်ဆပ်နိုင်၏။ ပြန်ဆပ် ကာလမှာ အများဆုံး ၁၂ နှစ်ဖြစ်၏။
လစဉ်အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်လို့ရသည်ဆိုစေ။ သင့်မိဘများ အလုပ်မှ အနားယူသည့်အခါ သူတို့သုံးရေးစွဲရေးအဆင်ပြေစေရန် ထိုပြန်ဆပ်ငွေကို များနိုင်သမျှများများပြန်ဆပ်ရန် အကြံပြုပါ၏။ လစဉ်များများပြန်ဆပ်သဖြင့်လည်း ပြန်ဆပ်ကာလ တိုမည်၊ အတိုးလည်း သက်သာမည်ဖြစ်၏။
ပိုက်ဆံပေးရန်နည်းလမ်းများ စင်ကာပူမှာ များစွာရှိပါသည်။ လွယ်လည်း လွယ်ပါသည်။ www.cpf.gov.sg, my cpf Online Services ၌ SingPass ကိုသုံးပြီး My Requests တွင်ပေးနိုင်၏။ သို့သော်လည်း သင့်တွင် DBS/POSB, UOB, Citibank, OCBC တို့အတွက်Internet Banking ရှိထားရပါမည်။ သို့မဟုတ် စင်ကာပူတစ်ဝှမ်းရှိ AXS stations, iNETS kiosks စသည်တို့တွင်လည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ Credit card ရှိသူတို့အဖို့ Visa/Mastercard တို့ဖြင့်လည်း ပေးနိုင်၏။
GIRO နဲ့ရော ပေးလို့မရဘူးလား၊ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတာပေါ့။
ရပါ့။ ခင်ဗျားလျှောက်ထားတဲ့ GIRO Application Status ကို www.cpf.gov.sg, under E-Services --> GIRO Application Status မှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
GIRO ပေးရင် ဘယ်ရက်တွေမှာ ဖြတ်သလဲ ?
လစဉ် ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဖြတ်ပါသည်။
ချေးငွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စဆပ်ဖို့လိုသလဲ?
သင်ဘွဲ့ရအပြီး၊ ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းကထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေ တစ်နှစ်တိတိကြာတဲ့အချိန်က စပြီး ဆပ်ရပါမည်။ စဆပ်ရမည့် လမတိုင်မီ ၃ လအလိုတွင် CPF က သင့်ထံစာပို့ပါလိမ့်မည်။
ကြွေးပြန်ဆပ်ဘို့ ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ ဆိုတာ ဘယ်မှာကြည့်လို့ရမလဲ ?
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။ www.cpf.gov.sg, my cpf Online Services ၌ SingPass ကိုသုံးပြီး My Statement à Section C à Education à Details of my Redemption Statement တွင်ကြည့်နိုင်ပါ၏။
ချေးငွေကို ပြန်ဆပ်ဖို့ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းပေးလို့ ရပါသလားခင်ဗျ။ ရတယ်ဆို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ရပါမလဲ?
၁။ သင်စစ်ထဲသွားနေတုံး (Serving full-time National Service)
၂။ ပြည်တွင်းမှာဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှာဖြစ်စေ အချိန်ပြည့် ကျောင်းဆက်တက်နေသေးတယ်ဆိုရင်
ချေးငွေကို ပြန်မဆပ်ဘဲနေလို့ရော ရပါသလားခင်ဗျ။ ရတယ်ဆို ဘယ်လိုအခါမျိုးတွေမှာ ရပါသလဲ?
၁။ သင် အသက် ၅၅ နှစ်ကျော်သွားတဲ့အခါ
၂။ သင့် CPF Minimum Sum ပြည့်သွားတဲ့အခါနဲ့ သင့် Medisave Requirement Amount ပြည့်သွားတဲ့အခါတွေမှာ
မှတ်ချက်။ ။ သိတော်မူကြသည့်အတိုင်း CPF နှင့် ပညာရေးအကြောင်းမှာလည်း အလွန်များပြားလှ၏။ ဖတ်ရင်း၊ ရေးရင်းနှင့် ကျွန်တော့်မှာ အလွန်ပျင်းလာရပြီဖြစ်ရကား ဤမျှနှင့်နားပါမည်။ ဒါနှင့်အားမရ၊ ဆက်သိလိုပါသေးသည် ဆိုသူများ
http://ask-us.cpf.gov.sg/explorefaq.asp?category=23068 ၌ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အလွန်များပြားလှသော CPF အကြောင်း ဤတွင်တစ်ခန်းရပ်ပါမည်။
မပျင်းမရိ ဖတ်ရှုအားပေးသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၂၉-၁-၂၀၁၂ နံက် ၁၁ နာရီ ၄၁ မိနစ်
Posted by အေးငြိမ်း at 11:57 AM